Izinqolobane zikaHugh Grant - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Ukuvala Izimpikiswano Namuhla, AmaJurors Wokulimaza Ngamabomu Komdlavuza Obangelwa yiRoundup
Posted on Mashi 26, 2019 by UCarey Gillam
(Umbhalo wezinqubo zanamuhla)
Abameli baka-Edwin Hardeman bethule impikiswano yabo yokuvala namuhla eNkantolo yesiFunda e-US eSan Francisco, becela ama-jurors ukuthi ajezise uMonsanto ngokwehluleka ukuxwayisa ngobungozi bomdlavuza we-Roundup herbicide.
Ummeli uJennifer Moore wethule ukuvalwa kwethimba labammangali, kanti ummeli kaMonsanto uBrian Stekloff wenza ingxoxo yakhe yokuvala, waqeda ukuqulwa kwecala okwase kuyinyanga yonke esivele saqopha isinqumo sokuqala sejaji esathola ukuthi iRoundup "yayiyinto ebalulekile" ekubangeleni ukuthi uHardeman IHodgkin lymphoma.
Isinqumo sejaji manje kumane nje kuyindaba yemali - noma ngabe uMonsanto kufanele akhokhe umonakalo, kufaka phakathi umonakalo wokujeziswa, kuHardeman. Yize amajaji esevele enqume ukuthi i-Roundup idale umonakalo ku-Hardeman, kusamele banqume ukuthi ngabe iMonsanto kufanele ithweswe icala ngaleyo ngozi. I- Imiyalo yamajaji shayela ama-jurors ukuze phendula imibuzo emithathu ukuze ukwazi ukunquma umonakalo: Ingabe ukwakheka kukaRoundup kwakungalungile? Ngabe i-Roundup yaswela isixwayiso esanele sezingozi ezingaba khona? Futhi ngabe iMonsanto yayinganaki ngokungasebenzisi ukunakekelwa okufanelekile ukuxwayisa ngezingozi ezibangelwa yiRoundup?
Abameli bakaMonsanto abakashintshi isikhundla sabo sokuthi iRoundup ayibangeli umdlavuza. Kepha ngendaba yesikweletu baphikise ukuthi ngesikhathi uHardeman wasebenzisa i-Roundup - kusuka ku-1986 kuya ku-2012 - akukho nhlangano yezomthetho noma yezempilo eyayidinga isexwayiso kumalebula e-Roundup maqondana nomdlavuza, kanti iMonsanto yayingenabo ubufakazi obuholela ekutheni ikholelwe ukuthi isixwayiso siyadingeka.
Ebufakazini bangoMsombuluko, owayenguSihlalo weMonsanto uHugh Grant uvikele ukuziphatha kwenkampani ezungeze iRoundup nokho wavuma inkampani ayikaze yenze ucwaningo lwezifo ze-Roundup yize inkampani yachitha imali engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 1 minyaka yonke icwaninga ngemikhiqizo emisha.
"UMonsanto wenza ngokuzibophezela," ummeli wenkampani UBrian Stekloff utshele ijaji evikini eledlule. Ukutshela ama-jurors "lo akuwona umncintiswano wokuthandwa," uthe abukho ubufakazi bokuthi uMonsanto wenza ngokunganaki. "IMonsanto, ehambisana nesayensi, ehambisana nokuthi isayensi ibibhekwa kanjani emhlabeni wonke, yenze ngendlela efanele futhi akufanele itholakale inecala," esho.
Abameli bakaHardeman batshele amajaji ukuthi kunengcebo yobufakazi besayensi obukhombisa izingozi zomdlavuza ezihambisana neRoundup kodwa uMonsanto wakhetha ukuzama ukucindezela kanye / noma ukudicilela phansi imininingwane kunokuba axwayise amakhasimende afana noHardeman.
Uma amajaji ethola ukuthi iMonsanto inesibopho, amaqembu asevele avumile inani elingu- $ 200,967.10 lokulahleka kwezomnotho. Kodwa ama-jorors angakhetha ukwengeza 'umonakalo ongekho ku-economic' kulesi sibalo, futhi bangeze nomonakalo wokujezisa.
UJaji Vince Chhabria kusho isinqumo esedlule ukuthi "kwakukhona ubufakazi obuningi" bokusekela umklomelo wokujeziswa kweMonsanto nokukhombisa ukuthi inkampani "ayikaze ithathe indlela ebhekele ukuphepha komkhiqizo wayo."
Ijaji lithe kukhona "ubufakazi obuqinile lapho ijaji lingaphetha ngokuthi iMonsanto ayinandaba nokuthi umkhiqizo wayo empeleni unikeza abantu umdlavuza, ugxile ekusebenziseni umbono womphakathi futhi ubukela phansi noma ngubani ophakamisa ukukhathazeka kwangempela futhi okusemthethweni ngale ndaba."
Esivivinyweni sokuqala somdlavuza we-Roundup, ijaji ngoJulayi odlule unikezwe izigidi ezingu-$ 289 kummangali uDewayne “Lee” Johnson, yize ijaji lanciphisa lesi sinqumo saba ngu- $ 78 million.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker UBrian Stekloff, Hugh, UJennifer Moore
Ubufakazi Obunqunyiwe Njengoba Isivivinyo Somdlavuza WeMonsanto Sivunguza Phansi
Posted on Mashi 25, 2019 by UStacy Malkan
Abameli baka-Edwin Hardeman ukunciphisa kakhulu inani lofakazi nobufakazi obuzokwethulwa kumajaji okufanele anqume ukuthi iMonsanto nomnikazi wayo omusha uBayer banesibopho sokukhulisa uHardeman we-non-Hodgkin lymphoma ngemuva kweminyaka yokusebenzisa i-Roundup kaMonsanto. Basalelwe ngamahora ambalwa ababelwe ijaji, athe lithe ulindele izimpikiswano zokuvala ngoLwesibili.
Ithimba lamajaji elinamalungu ayisithupha linqume ngesonto eledlule ukuthi iRoundup empeleni ibiyinto ebalulekile ekudaleni umdlavuza kaHardeman. Icala manje seligxile ekutheni kufanele kusolwe uMonsanto noma cha, futhi uma kunjalo, malini - uma kukhona - inkampani kufanele ikhokhele uHardeman kumonakalo.
Kodwa ukwenza lelo cala kungaba nzima uma ubheka isikhathi esifushane sabameli bommangali abasishiye “ewashi lesikhathi” seliphelele elibekwe yiJaji uVince Chhabria. Unikeze uhlangothi ngalunye amahora angama-30 ukuthi enze udaba lwabo.
Abameli bakaHardeman basebenzise isikhathi sabo esiningi engxenyeni yokuqala yokuqulwa kwecala futhi manje banamahora ambalwa asele. Ngenxa yalokho, banayo lazise ijaji ukuthi ngeke babize ubufakazi obuhleliwe obuvela kubaphathi beMonsanto uDaniel Goldstein, uSteven Gould, uDavid Heering, noma uDaniel Jenkins. Futhi abazobe bethula ubufakazi obuhleliwe obuvela kuRoger McClellan, umhleli wephephabhuku lesayensi Ukubuyekezwa Okubalulekile ku-Toxicology (I-CRT), kanye nabanye ofakazi okungenani abane.
UMcClellan ubengamele i-CRT ngesikhathi iphephabhuku lishicilela uchungechunge lwamaphepha ngoSepthemba 2016 akhuza lokho okutholwe yi-International Agency for Research on Cancer (IARC) ethola ukuthi i-glyphosate iyingozi yomdlavuza womuntu. Amaphepha athi abhalwe ngososayensi abazimele abathole ukuthi isisindo sobufakazi sikhombise ukuthi umbulali wokhula ubengeke abeke ingozi yomdlavuza kubantu. Kepha imibhalo yangaphakathi yeMonsanto khombisa ukuthi amaphepha acatshangwe kwasekuqaleni njengecebo likaMonsanto lokudicilela phansi i-IARC. Omunye wososayensi abaphezulu beMonsanto hhayi kuphela ubuyekeze imibhalo yesandla kepha ube nesandla ekubhaleni nasekuhleleni, noma kunjalo lokho akudalulwanga yiCRT.
Abameli bakaHardeman bahlela cishe amahora amathathu obufakazi obuvela kofakazi abahlukahlukene, kufaka phakathi owayenguSihlalo weMonsanto kanye noMphathi Omkhulu uHugh Grant, owathola imali engango- $ 32 million ngesikhathi iBayer AG ithenga iMonsanto ehlobo eledlule.
Zombili izinhlangothi sezivumile ukuthi uHardeman ulahlekelwe yimali elinganiselwa ku- $ 200,000 kumonakalo wezomnotho, kepha abameli bakaHardeman kulindeleke ukuthi bacele amashumi ezigidi zamadola, futhi mhlawumbe namakhulu ezigidi zamaRandi ngomonakalo ophelele, kufaka phakathi ukujeziswa.
Abameli beMonsanto baphikise noma yikuphi ukuxoxwa ngengcebo kaMonsanto kanye neBayer engamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-63 akhokhele iMonsanto, kodwa ijaji livumele imininingwane ethile yezezimali ukuthi yabelwe namajaji.
AmaJurors kungenzeka angatshelwa ncamashi ukuthi yimalini iMonsanto ayenzile eminyakeni edlule ekuthengiseni ama-herbicides ayo e-glyphosate, kepha ukubheka unyaka owodwa kuphela wezezimali - 2012, unyaka uHardeman ayeke ukusebenzisa iRoundup - kukhombisa ukuthi inkampani yenze cishe $ 2 billion ngenzuzo ephelele lowo nyaka.
IJaji uChhabria kuphawulwe ezingxoxweni nabameli ngaphandle kobukhona bejaji ukuthi abameli bakaHardeman bangafuna ukuphikisa ukuthi uMonsanto usebenzise imali eningi ekukhangiseni nasekukhokheleni abaphathi kunokuba benze izifundo zokuphepha zesikhathi eside emikhiqizweni yayo. Izinkinga zemali kungenzeka zihambisane nokucatshangelwa kwamajaji mayelana nomonakalo ongaba khona wokujeziswa, kusho uChabria.
"Kungabhekanwa nekhono likaMonsanto lokukhokha, kepha kubukeka kuhambisana kakhulu nodaba lokuthi yini eyayingaziwa - ukulimala kanye nokujeziswa, noma ngabe isenzo sikaMonsanto sasisibi kakhulu futhi sinolaka," kusho iJaji uChhabria. "Kungani bengenakuphikisana, bheka yonke imali uMonsanto abezimisele ukuyisebenzisa ekukhangiseni futhi akazimisele ukwenza noma yiluphi uhlobo lokuphenya ngenhloso yokuphepha komkhiqizo wayo."
"Akukhulunywa kakhulu ngekhono lenkampani kodwa kumayelana nokuziphatha kwenkampani maqondana nokuphepha komkhiqizo wayo," kusho uChabria. “Bheka zonke lezi zinto inkampani esebenzisa imali eningi ngokweqile, futhi ayizimisele ukuphakamisa umunwe ukwenza noma yiluphi uhlobo lophenyo olunenhloso mayelana nokuphepha komkhiqizo wayo. Ngicabanga ukuthi leyo yingxabano yabo. ”
UChhabria uthe ubufakazi bezezimali zikaMonsanto bungaba “ngamacala” “okuthukuthelisa ukuziphatha kwenkampani.”
Ukuqala Kwesilingo sePilliod
Icala lesithathu lomdlavuza weRoundup liyaqhubeka kuleli sonto e-Alameda County Superior Court e-Oakland, eCalifornia. I-Alva ne-Alberta Pilliod, umyeni nenkosikazi, bathathe uMonsanto noBayer ngezimangalo ukuthi bobabili baphethwe yi-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuvezwa kwemikhiqizo kaMonsanto's Roundup. IVoir dire yokukhethwa kwamajaji iqala namuhla e-Oakland kanti izitatimende zokuvula kulindeleke ukuthi ziqale ngoLwesine. Bona imibhalo ehlobene nalelo cala kulesi sixhumanisi.
Ijaji ecaleni likaPilliod lisichithile isicelo sikaMonsanto sokuqulwa kwecala. Ithimba lezomthetho elethula icala lePilliod lifaka ummeli waseLos Angeles uBrent Wisner, owazakhela udumo uwine ngummangali uDewayne “Lee” Johnson ngaphezulu kweMonsanto esivivinyweni sokuqala somdlavuza weRoundup ehlobo eledlule.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker UBrent Wisner, Ukubuyekezwa Okubalulekile ku-Toxicology, I-CRT, UDaniel Goldstein, UDaniel Jenkins, UDavid Heering, Hugh, URoger McClellan, USteven Gould
Posted on Mashi 25, 2019 by UCarey Gillam
Thola izibuyekezo eziningi nemibhalo kusuka ezivivinyweni ku- I-Monsanto Trial Tracker.
“Kungaba nekhono lokukwazi ukukhokha kukaMonsanto, kodwa kubukeka kufaneleke nakakhulu
udaba lokuthi yini eyayingaziwa - kokubili isikweletu kanye nomonakalo wokujeziswa, noma ngabe ukuziphatha kukaMonsanto kwakweqile futhi kunolaka, ”kusho iJaji uChhabria. "Kungani bengenakuphikisana, bheka yonke imali uMonsanto abezimisele ukuyisebenzisa ekukhangiseni futhi akazimisele ukwenza noma yiluphi uhlobo lokuphenya ngenhloso yokuphepha komkhiqizo wayo."
"Akukhulunywa kakhulu ngekhono lenkampani kodwa kumayelana nokuziphatha kwenkampani maqondana nokuphepha komkhiqizo wayo," kusho uChabria. “Bheka zonke lezi zinto inkampani esebenzisa imali eningi ngokweqile, futhi ayizimisele ukuphakamisa umunwe ukwenza noma yiluphi uhlobo lophenyo olunenhloso mayelana nokuphepha komkhiqizo wayo. Ngicabanga ukuthi lokho kungukuphikisana kwabo. ”
Icala lesithathu lomdlavuza weRoundup liyaqhubeka kuleli sonto e-Alameda County Superior Court e-Oakland, eCalifornia. I-Alva ne-Alberta Pilliod, umyeni nenkosikazi, bathathe uMonsanto noBayer ngezimangalo ukuthi bobabili baphethwe yi-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuvezwa kwemikhiqizo kaMonsanto's Roundup.
IVoir dire yokukhethwa kwamajaji iqala namuhla e-Oakland kanti izitatimende zokuvula kulindeleke ukuthi ziqale ngoLwesine. Bona imibhalo ehlobene nalelo cala kulesi sixhumanisi.
izibulala-zinambuzane Bayer, Ukubuyekezwa Okubalulekile ku-Toxicology, I-CRT, UDaniel Goldstein, UDaniel Jenkins, UDavid Heering, Hugh, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, URoger McClellan, RoundUp, USteven Gould
Isisulu Somdlavuza Sibuyiselwe Esitimeleni
Posted on Mashi 22, 2019 by UCarey Gillam
Ummangali u-Edwin Hardeman uthathe lesi sikhundla namuhla ukuze anikeze ubufakazi obengeziwe ecaleni lakhe elibhekene noMonsanto mayelana nokuthi ukusetshenziswa kwakhe kwe-Roundup herbicide yenkampani kwamenza waba ne-non-Hodgkin lymphoma.
UHardeman usevele wethule ubufakazi esigabeni sokuqala secala, esakhipha isinqumo senkantolo ngazwilinye esathola ukuthi uRoundup nguye owayesolwa ngomdlavuza wakhe. Ubufakazi bakhe namuhla buphendule umbuzo wesibopho sikaMonsanto nokuthi ngabe inkampani kufanele ikhokhe imali yokulahlekelwa yimpilo yakhe.
Abameli bakaHardman bazama ukukholisa abameli ukuthi uMonsanto wayebazi ubungozi bemikhiqizo yayo kepha wasebenza ngenkuthalo ukucindezela lolo lwazi ngamasu ahlukahlukene, kufaka phakathi ukucindezela abalawuli, ukubhala ghostwriting izincwadi zesayensi, nokudukisa abathengi abanjengoHardeman onokumaketha okunzima mayelana nokuphepha ukhula lwe-glyphosate-based.
Esigabeni sokuqala sokuqulwa kwecala, iJaji uVince Chhabria ulinganisele ubufakazi obufushane ngokwelashwa kukaHardeman kanye nokuhlupheka akubekezelele. Kulesi sigaba, ubufakazi obunjalo buvunyelwe.
Amajaji nawo ezwe ngoMary Hardeman, unkosikazi ka-Edwin, ngoLwesihlanu. Esigabeni sokuqala, ebesikhuluma kuphela ngobufakazi obuphathelene nokuthi ngabe uRoundup ubangele umdlavuza kaMnu uHardeman noma cha, ijaji likhuze ummeli kaHardeman u-Aimee Wagstaff ngokuzama ngisho nokwethula uMary Hardeman kuma-jur nangokuchaza ngokuqomisana kwalezi zithandani nokushada isikhathi eside.
Okunye okwathatha isikhundla kwaba ngummangali ufakazi onguchwepheshe uChadi Nabhan, isikhulu sezokwelapha seCardinal Health eChicago.
Ufakazi wokuqala ngoLwesihlanu kwakungusosayensi wezobuthi waseMonsanto uDonna Farmer, ubufakazi bakhe obethulwa ngevidiyo. Abameli bakaHardeman baqale ubufakazi bakhe ngoLwesithathu. Ayikho inkantolo ebibanjwe ngoLwesine.
Ngesonto elizayo, abameli bakaHardeman bahlela ukudlala ubufakazi bevidiyo yalowo owayenguSihlalo noMonsanto omkhulu kaMonsanto uHugh Grant.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Chadi Nabhan, UDonna Farmer, U-Edwin Hardeman, Hugh, UJaji Vince Chhabria, UMary Hardeman
IHepatitis C no… Hugh Grant?
Posted on Mashi 11, 2019 by UGary Ruskin
(Bona isibuyekezo sevidiyo lapha)
(Umbhalo osuka ekuqhubekeni kwanamuhlas)
Ithimba labameli bakaMonsanto ngoMsombuluko lethule ubufakazi obuqhamuka kuDkt. Alexandra Levine, isazi se-hematologist / i-oncologist esikhungweni seCity of Hope Comprehensive Cancer Center, efuna ukukholisa abezomthetho ukuthi ukuvezwa kwemithi yokubulala ukhula eseglyphosate kwakungeyona imbangela yomdlavuza kaHardeman, nokuthi Isici i-hepatitis C Hardeman ebinayo iminyaka eminingi. U-Levine ufakazele ukuthi ubone “iziguli eziningi kakhulu, eziningi, ezine-non-Hodgkin's lymphoma,” futhi empeleni uthathwa njengongoti kuleso sifo esithile.
IJaji uChhabria uthe ngesonto eledlule angathanda ukubona lesi sigaba sokuqala secala sisongwa ekuqaleni kwaleli sonto, okusho ukuthi leli cala kumele libe nejaji kungekudala. Isinqumo sidinga ukuthi wonke amajaji ayisithupha ahlangane ngokuvumelana ekutholeni kwabo maqondana nokuthi ukuvezwa kukaHardeman kuRoundup “bekuyinto ebalulekile” ekudaleni umdlavuza wakhe. Ijaji lizochazela amajaji ukuthi kusho ukuthini lokho. (Bheka ukungena kwangoLwesihlanu ukuthola eminye imininingwane.)
Uma ijaji lingavumi ngazwilinye ukunquma uHardeman noma uMonsanto lelo cala lizoba yi-mistrial. UChabria uphinde wathi uma lokho kwenzeka ucabanga ukukuzama ngoMeyi.
Uma ijaji lithola uHardeman nge-causation, ukuqulwa kwecala kungashesha kungene eSigabeni II kusetshenziswa ijaji elifanayo. Futhi kulapho izinto zizoqala ukuheha ngempela. Abameli bakaHardeman hlela ukufona abaphathi abaningana beMonsanto ngobufakazi, kufaka phakathi owayenguSihlalo weMonsanto kanye ne-CEO uHugh Grant. UGrant uchithe iminyaka engaphezu kwengu-35 kule nkampani waqokwa njenge-CEO ngo-2003. Wayehola le nkampani yaze yatholwa yiBayer AG ehlobo eledlule.
Ngokwengeziwe, abameli bakaHardeman bahlela ukubiza uRoger McClellan, umhleli wephephabhuku lesayensi Ukubuyekezwa Okubalulekile ku-Toxicology (I-CRT), eyashicilela uchungechunge lwamaphepha ngoSepthemba 2016 akhuza lokho okutholwe yi-International Agency for Research on Cancer (IARC) ethola ukuthi i-glyphosate iyi-carcinogen yabantu. Amaphepha athi abhalwe ngososayensi abazimele abathole ukuthi isisindo sobufakazi sikhombise ukuthi umbulali wokhula ubengeke abeke ingozi yomdlavuza kubantu.
Nokho, imibhalo yangaphakathi yeMonsanto khombisa ukuthi amaphepha acatshangwe kwasekuqaleni njengecebo likaMonsanto lokudicilela phansi i-IARC. Omunye wososayensi abaphezulu beMonsanto hhayi kuphela ubuyekeze imibhalo yesandla kepha ube nesandla ekubhaleni nasekuhleleni, yize lokho kungadalulwanga yiCRT.
Abameli bakaHardeman ngokwengeziwe bathe bahlela ukushaya ucingo UDoreen Manchester, weCropLife America, inhlangano yezimboni yezolimo ephembelelayo. Indima kaManchester kuCropLife ibisiza "ukuhola amacala kahulumeni nawombuso ukuxhasa izindaba zokulawulwa kwezibulala-zinambuzane."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Ukubuyekezwa Okubalulekile ku-Toxicology, CropLife Melika, I-CRT, UDoreen Manchester, UDkt. Alexandra Levine, hepatitis C, Hugh, URoger McClellan